अर्जेन्टिने डोगो, एक प्रजाति जसले तपाईंलाई प्रेममा पर्दछ: सुविधाहरू र हेरचाह | कुकुरहरु को विश्व
लुर्ड्स सरमिआन्टो | | सामान्य कुकुरहरु
'डोगो अर्जेन्टिनो' भनेर चिनिने प्रजातिको उत्पत्ति अर्जेन्टिना, टang्गोको देशमा हुन्छ। यो उनीको बारेमा भन्न सकिन्छ कि 'पेरो पिला अर्जेन्टिनो' को नमूनासँगै। तिनीहरू देश मा एक मात्र दौड हो कि अझै लागू छन्।
यसको इतिहास सन् १ 1920 २० मा मेल खान्छ जब डा। नोर्स मार्टिनेज एक खेल जनावरको खोजीमा सबै गुणहरू भेला गर्न भेला भएका थिए। उच्च शक्ति संग एक शिकार नस्ल। थप रूपमा, यो नाम शिकार कुकुरहरूले ठीक शक्तिशाली कुकुरहरू द्वारा पनि सिर्जना गरिएको हो।
3 सरसफाइ र हेरचाह
यो नस्ल ठूलो नमूनाको रूपमा चिनिन्छ र यसको उपस्थितिको सन्दर्भमा यो सामान्यतया बलियो र दृढ हुन्छ। यसको फर सेतो छ जसले यसलाई धेरै भव्य बनाउँछ, त्यस्तै छोटो छ र केहि कालो दागहरु संग त्यो थूली र कानमा देख्न सकिन्छ।
ऊ एकदम सक्रिय छ दिनमा धेरै चोटि लामो हिंड्नु आवश्यक पर्दछ ऊ थकित नभएसम्म, यद्यपि उसको लागि यो फेरि घरमा प्रवेश गर्न गाह्रो छ।
लामो पदयात्रा को माध्यम बाट प्रशिक्षण स्थिर हुनु पर्छ किनभने यो एक धेरै सक्रिय नमूना हो। यदि तपाईंले त्यो अंश बेवास्ता गर्नुभयो भने, यस कुकुरको जातको यसको शक्तिहरू च्यानल गर्न कुनै तरिका छैन र ऊ नर्वस र आक्रामक पनि हुन सक्छ। यो तपाइँको स्वभाव होइन तर तपाइँ तपाइँको प्रकृति को तनाव जारी गर्नुपर्छ।
एक पर्याप्त विनम्र स्वभाव राखेर, यो प्रशिक्षण दिन भाग जटिल छैन, यति तिनीहरूलाई प्रशिक्षण सजिलो छ.
घर को विशेषताहरु को रूप मा, ती तिनीहरु लाई सबै प्रकार को लागी अनुकूलन। हामीले पहिले नै उल्लेख गरिसकेका छौं कि कुकुरको यो नस्ल मानिस र अन्य जनावरहरूसँग राम्रोसँग जान्छ, तर तपाईंले यो पनि विचार गर्नुपर्छ तपाईलाई नचिनेका मानिसहरुको बारे केही शंकास्पद हुन सक्नुहुन्छ।
अन्य कुकुरहरूसँगको अन्तरक्रियाको सम्बन्धमा, यो केही हदसम्म प्रभावशाली हुन सक्छ, यसको मतलब यो होइन कि यसले उनीहरूसँग सकारात्मक अन्तरक्रिया गर्न सक्दैन। ऊ बोर हुन मन पराउँदैन। यसको तौल and० देखि kg 40 केजी बीचमा पर्न सक्छ, यसको रंग सेतो छ र औसत आयु अवधि बाह्र बर्षसम्म पुग्न सक्छ।
उहाँ चरित्रमा धेरै वफादार र सतर्क हुनुहुन्छ, केहि अपरिचितको संदिग्ध र बलियो पारिवारिक सम्बन्ध। स्थितियां जसले यो ब्रेक उत्पन्न गर्दछ निश्चित रूपमा तपाइँको भावनात्मक राज्यलाई असर गर्दछ।
यसमा ध्यान दिएर हेर्ने क्षमता छ, आँखा अन्धकार रंगको छ, तिनीहरू एक अर्काबाट व्यापक रूपमा छुट्टिएका छन् र अंडाकार आकार छन्। कानहरू परम्परागत रूपमा काटिएका छन् यसलाई त्रिकोणीय आकार दिनका लागि, हाल धेरै देशहरूले यस अभ्यासलाई निषेध गर्छन्।
प्रशिक्षण को भाग को रूप मा यो ध्यान दिनु पर्छ कि यो एक धेरै चंचल कुकुर हो, ताकि योसँग घर कम्पनीको सब भन्दा सानो राख्न आवश्यक गुणहरू छन्।
यद्यपि यसको स्वभाव अन्य जातिहरू भन्दा फरक छ, एक समाजीकरण प्रक्रिया सहि रूपमा लागू गरियो उसले अरू कुकुरहरूसँग कुराकानी गर्न सक्षम हुनेछ। स्पेनमा त्यहाँ धेरै प्रशिक्षण प्रविधिहरू छन् जुन व्यक्तिगत शिक्षणदेखि सामूहिक प्रविधिहरू सम्मिलित छन्।
प्रशिक्षण एक रमाईलो वातावरण मा धेरै आरामदायक अवस्थामा बाहिर हुनु पर्छ, सबै भन्दा माथि, त्यहाँ घरमा दृढ मानहरू हुनुपर्दछ.
अवश्य कुकुर यो कुरा स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ कि उसले घर भित्र रहेको स्थानलाई स्पष्ट पार्दछ, यस प्रकारको जाति धेरै बौद्धिक छ तर साहसी छ धेरै धूर्त हुनुका लागि, सम्झनुहोस् कि तिनीहरू जन्म विजेता हुन्।
यो कुकुरलाई भीख माग्न मनपर्दछ र ऊ आफ्ना संरक्षकहरूको जाँच गर्न मनपर्दछ, तर म तपाईंलाई निश्चित गर्दछु तिनीहरू सबै अर्डरहरू बुझ्दछन्.
ऊ पनि एक महान खेलाडी हो त्यसैले ऊ विभिन्न गतिविधिहरुमा एक महान साथी हुन सक्छ, क्षेत्र मा धेरै बाहिर खडा जहाँ यो वास्तव मा यसको क्षमता देखाउँदछ, र यो यो अझै पनी शिकार कुकुर हो।
यो नमूना दुरुपयोग र चिच्याउन धेरै जोखिमपूर्ण छ, त्यसैले यसलाई शारीरिक रूपमा सजाय गर्ने बारेमा पनि नसोच्नुहोस् (यो नस्ल र कुनै पनि प्रकारको जनावर)। तिनीहरू आफ्नो व्यवहारको लागि पुरस्कृत हुन मन पराउँछन्, यो सकारात्मक व्यवहार मा प्रबलित छ। यस तरिकाले, यो कुकुरलाई स्थिर र आनन्दित राख्दै, छिटो सिक्नको लागि यो सम्भव छ।
तपाईं सुधारात्मक प्रविधिहरू लगातार र दोहोर्याएर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, तर नम्र रहनुहोस्। मौखिक भन्दा शरीर प्रविधि प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, केवल विशेष अवसरहरूमा तपाईं आवाजको एक दृढ टोन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
कति सजिलै ऊब सिक्ने सत्र अधिकतम १-15-२० मिनेटमा हुनुपर्दछ।
गतिविधिहरू फरक पार्नुहोस्, रमाईलो र साधारण कार्यहरू सहित बिभिन्न खेलहरू खेल्नुहोस्। यदि तपाईं वैकल्पिक, तपाईंले कुकुरले उत्साहका साथ प्रतिक्रिया जनाउनुहुनेछ तिनीहरूलाई बोरिंगको रूपमा बेवास्ता गर्नुको सट्टा, यो अनौठो हो तर ऊ त्यस्तो हो!
हामी तपाईंलाई फेरि सम्झाउछौं कि तपाईंको प्रशिक्षण गहन हुनुपर्दछ, एक धेरै सक्रिय नस्ल हुन को लागी तपाईले धेरै व्यायाम गर्नु पर्छ र यसलाई धेरै आराम र स्थिरता चाहिन्छ।
यो कसरी सिकार कुकुर हो र यदि यसले पारिवारिक बन्धन प्राप्त गर्यो, यदि तपाइँले केही अनौंठो अवलोकन गर्नुभयो भने यसको सुरक्षा बिना नै सुरक्षाको लागि झल्किन्छ। यो सामूलीकरण हुनुपर्दछ जब तिनीहरू पपीहरू हुन्, यसको मतलब यो होइन कि यो वयस्कको रूपमा गर्न सकिदैन, तर यसलाई सानै उमेरमा गर्न सजिलो हुन्छ।
सरसफाइ र हेरचाह
यो नमूना सामान्यतया यो एक धेरै स्वस्थ मजबूत र मजबूत कुकुर होऊ बिरामी भएको देख्न साधारण छैन तर तपाई सधै सावधान हुनुपर्दछ। सबैभन्दा सामान्य यो प्रस्तुत गर्न सकिन्छ कि हिप डिसप्लासिया साथै संयुक्त समस्याहरू हुन्, तर त्यसको लागि पोषण आवश्यक छ। सम्झनुहोस् कि उनीहरू अधिक वजनको झुकाव हुन्!
यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं यसको नियन्त्रणको लागि नियमित आधारमा पशुचिकित्सक जानुहुन्छ, त्यहाँ अर्जेन्टिना डोगो जातिको प्रतिलिपिहरूको प्रमाणहरू छन्। बहिरो अवस्था
तिनीहरूको छाला धेरै संवेदनशील हुन्छ र तिनीहरू सूर्यको लामो जोखिमबाट गम्भीर जलेको अवस्थामा पर्न सक्छ। तपाईको दैनिक व्यायामको क्रममा हिंड्दा पनि सावधानी अपनाउनुहोस् ताकि तपाईं टिक वा अन्य परजीवीहरू बाट संक्रमित नहुनुहोस्.
तपाईंले यसलाई फोहोर हटाउन प्राय: ब्रश गर्नु पर्छ, एक महिना को लागी दुई पटक पर्याप्त भन्दा बढी हुनेछ। आँखा, मुख र कानमा यसको स्वच्छता यसको लागि स्वस्थ र सुन्दर हुन आवश्यक छ।
अर्को धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो तपाईंले उसको आँखाको ख्याल गर्नुपर्छ, 'पानी आँखा' को खराब को कारण सूजन को जोखिम कम गर्न को लागी लगभग दैनिक सफाई संग।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यो जात बिल्कुल आक्रामक छैन, तिनीहरू मनमोहक र धेरै बच्चाहरू छन्। यो प्रसिद्ध डोगो अर्जेन्टिनो हो, बलियो, शान्त, साहसी, उत्कृष्ट साथी र यो बिर्सनु भएन कि उहाँ परिवारको महान संरक्षक हुनुहुन्छ किनभने उहाँसँग बलियो बन्धनको विकास हुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: कुकुर संसार » सामान्य कुकुरहरु » अर्जेन्टिना डोगो